प्रदीप गिरि - कान्तिपुर समाचार
प्रत्येक समाजमा दन्त्यकथा, लोककथा हुन्छन् । पुराण पनि हुन्छन् । दन्त्यकथा, लोककथा र पुराणलाई एक–अर्काको पर्याय मान्नुपर्छ भन्ने छैन । पुराणले सृष्टिको रहस्य बुझ्न खोज्छ । दन्त्यकथा र लोककथाले मानिसको व्यक्तित्व बुझ्न धेरै मद्दत गर्छ ।मैले स्कुल पढ्दा अत्यन्तै चाख मानेर पढेको पुस्तक हो, बोधविक्रम अधिकारीको ‘नेपाली दन्त्यकथा’ ।
आजको सन्दर्भमा गान्धी
गान्धीलाई बुझ्नु कठिन छ । ‘आधुनिक’ कहलाउने मानिसका निम्ति अझ विशेष कठिन छ । १९३६ ई. मा पण्डित जवाहरलाल नेहरूको बहुचर्चित आत्मकथा छापिएको थियो । त्यसमा अनेकन ठाउँमा गान्धीको प्रसंग छ । त्यस्ता प्रत्येक उल्लेखमा नेहरूले गान्धीको व्यक्तित्वलाई लिएर विस्मय व्यक्त गरेका छन् । नेहरूका अनेकन टिप्पणीमध्ये निम्नलिखित विशेष पठनीय छ :
प्रत्येक महापुरुष आफ्नो युगको सन्तान हुन्छन् । बीपी कोइराला अपवाद हुनुहुन्नथ्यो । तर यति मात्र भन्दा थप कुरो प्रस्टिँदैन । खास बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ– बीपी जन्मनु र हुर्कनुभएको त्यस युगका कार्यभार के थिए ? आजका निम्ति बीपीको अवदान के हो ?
वैशाख २९, २०७५
‘मेरा विचार फेरिइरहन्छन् । हिजोका र आजका मेरा भनाइ फरक पनि हुन सक्छन् । त्यस्तो फरकमा मेरा पछिल्लो कुरालाई मान्यता दिनुहोला !’गान्धी यस्तो कुरा भनिरहनु हुन्थ्यो । आफ्नै कथनी र कथनीमा फरक छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, अनुभूति थियो उहाँमा ।
वैशाख २२, २०७५
सभ्यताको थालनीदेखि मानिसले आपस्तमा के कस्ता प्रकारले र कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराले महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसै सिलसिलामा राज्य र राजतन्त्रको उत्पत्ति भयो । प्राचीन समाजमा गणराज्य पनि प्रयोगशील थिए । एथेन्समा भएको गणतान्त्रिक प्रयोगले प्लेटो र एरिस्टोटलको राजनीतिक चिन्तनलाई सूचित गरेको थियो । नेपालमा लिच्छवि गणराज्यको उल्लेख छ । गौतम बुद्धका पिता कदाचित त्यस्तै गणाधिपति थिए ।
प्रदीप गिरिका लेखहरु :
वाम एकता : प्रचण्डको आखिरी चमत्कार
आश्विन २०, २०७४
काठमाडौं उपत्यका सधैं रोमाञ्चको प्रतीक्षामा रहन्छ । तदनुरूप नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल यस साता छापाहरूका बिकाउ समाचार भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको १२ वर्षअघिको त्यो अवतरण यस्तै हर्षबढाइँसाथ भएको थियो ।
आश्विन ७, २०७४
क्रान्तिको इतिहास हेर्दा विद्रोह जहिले पनि शासक वर्गभित्रबाटै हुन्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तै भएको छ । गणेशमान सिंह भारदार परिवारका थिए । टंकप्रसाद आचार्यका बाबु पनि बडाहाकिम थिए ।
यसपल्ट त मनै फाट्यो...?
असार १२, २०७४
केही दिनअघि कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्मासमेतको टोलीले मधेसको यात्रा गरिएको विवरण छापिएको छ । शर्माले लेख्नुभएको छ, मधेसमा ‘उनीहरू’ र ‘हामी’ भन्ने भावना विकसित हुँदै गएको छ, मधेस र राज्यका बीच मतभेदभन्दा पनि मनभेद बढेको छ ।
केही दिनअघि कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्मासमेतको टोलीले मधेसको यात्रा गरिएको विवरण छापिएको छ । शर्माले लेख्नुभएको छ, मधेसमा ‘उनीहरू’ र ‘हामी’ भन्ने भावना विकसित हँुदै गएको छ, मधेस र राज्यका बीच मतभेदभन्दा पनि मनभेद बढेको छ ।
बीपी कोइराला प्रत्यागमनको अर्को कथा
फाल्गुन ७, २०७३
आठ वर्षको लामो भारत प्रवासपछि आजभन्दा झन्डै ४० वर्षअघि बीपी कोइराला ३० डिसेम्बर १९७८ का दिन नेपाल फर्कनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा त्यस दिनलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको संज्ञा दिइएको छ । अक्टोबर १९६८ का दिन कोइराला सुन्दरीजलको कारावासबाट रिहा हुनुभयो ।